Laanta Shaqaalaynta oo la wareegeysa isdhexgalka | Somaliska
Nolosha / Shaqada & Ganacsiga
Ka bilaabata 1da bisha December ee sanadkaan ayaa waxaa is bedel lagu samenayaa nidaamka isdhexgalka ee Sweden. Sida hada ay wax u dhacaan ayaa ah in uu Kamuunka kasta leeyahay xafiis loogu tala galay in uu fududeeyo arimaha isdhexgalka kuwaasoo masuul ka ah dhamaan hawlaha introductionka iyo isdhexgalka. Balse arintaan ayaa is badal ku imaanayaa ayadoo hawlaha Isdhexgalka ay la wareegi doonto Laanta Shaqaaleynta ee Sweden (Arbetsformedlingen). Sida ay ii sheegtay mid ka mid ah gacanyaraasha xafiiska Isdhexgalka guud ahaan albaadada looma laabi doono xafiiska ayadoo ii sheegtay in dadka yimaada Kamuunada wixii ka dambeeya bisha December oo kaliya ay ku wareegi doonaan Xafiiska Shaqaaleynta balse dadkii hore ay wali ku xirnaan doonaan Xafiiska Isdhexgalka. Sidoo kale dadka cusub ayaan laftooda 100% ku xirnaan doonin Laanta Shaqaalaynta balse howlaha qaarkood ay qabandoonaan Xafiiska Isdhexgalka. Guud ahaan arintaan ayaa ah mid muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed, ayadoo dowlada Sweden ay bedeshay siyaasadeedii ku dhisneyd waxbarashada ayagoo hada sheegay in ay nidaamnka Isdhexgalka ku saleynayaan shaqaalayn taasoo macnaheedu yahay in qofkasta shaqo loo raadiyo.
Ka bilaabata 1da bisha December ee sanadkaan ayaa waxaa is bedel lagu samenayaa nidaamka isdhexgalka ee Sweden. Sida hada ay wax u dhacaan ayaa ah in uu Kamuunka kasta leeyahay xafiis loogu tala galay in uu fududeeyo arimaha isdhexgalka kuwaasoo masuul ka ah dhamaan hawlaha introductionka iyo isdhexgalka. Balse arintaan ayaa is badal ku imaanayaa ayadoo hawlaha Isdhexgalka ay la wareegi doonto Laanta Shaqaaleynta ee Sweden (Arbetsformedlingen).
Sida ay ii sheegtay mid ka mid ah gacanyaraasha xafiiska Isdhexgalka guud ahaan albaadada looma laabi doono xafiiska ayadoo ii sheegtay in dadka yimaada Kamuunada wixii ka dambeeya bisha December oo kaliya ay ku wareegi doonaan Xafiiska Shaqaaleynta balse dadkii hore ay wali ku xirnaan doonaan Xafiiska Isdhexgalka. Sidoo kale dadka cusub ayaan laftooda 100% ku xirnaan doonin Laanta Shaqaalaynta balse howlaha qaarkood ay qabandoonaan Xafiiska Isdhexgalka.
Guud ahaan arintaan ayaa ah mid muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed, ayadoo dowlada Sweden ay bedeshay siyaasadeedii ku dhisneyd waxbarashada ayagoo hada sheegay in ay nidaamnka Isdhexgalka ku saleynayaan shaqaalayn taasoo macnaheedu yahay in qofkasta shaqo loo raadiyo.
Ciidaha Muslimiinta & Xisbiga SocialDemokraterna
Facebook isticmaal balse ka digtoonoow